SAMEYNTA GANACSIGA AKOON TIJAABO AH
BILAA DHIGAAL, KHATARNA KA MADHAN
Ku Baro Jawi Khatar ka Madhan
Suuqa sarifka lacagaha qalaad ayaa ah suuqa ugu weyn uguna caansan adduunka oo dhan, oo 5.3 tiriliyan doolar lagu kala ganacsado maalin kasta FX. Ka furo akoon tijaabo ah maanta dilaal kugu dhiirigelinaya suuqa sarifka lacagaha qalaad , oo samee xeeladaada ganacsi adiga oo haysta $50,000 oo doolar oo aan run ahayn, KHATARI MA JIRTO!
Dhamaan ganacsatadayada tijaabada (demo-ga) waxay kale oo ay heli karaan casharo badan oo abaalmarino leh, iyagoo ka caawinaya inay qorsheeyaan istiraatiijiyadooda ganacsi ee xiga.
Ogow maanta adduunka ganacsi ee suuqa sarifka lacagaha qalaad, ganacsiga CFD, ganacsiga mustaqbalka iyo ganacsiga badeecada. Dhameystir maanta foomka boggan, si aad u bilowdo..
Baro Ganacsiga, KHATAR KA MARAN
Bilaw safarkaaga ganacsi si aamin ah, jawi tijaabo oo macmal ah ayna la socdaan dhamaan faa’idooyinkii akoonka tooska ahaa ayna ku jiraan xaaladaha ganacsiga ee tooska ah. Khabiir ku noqo barnaamijka ganacsiga MT4 iyo dhamaan qaababka uu u shaqeeyo.
Ku raaxayso sahlayaasha ganacsiga oo ku tababaro istiraatiijiyadaha ganacsi iyo aaladaha maaliyadeed ee kala duwan si aan u horumariso kalsoonida ganacsigaaga.
Ku Ganacso Waqti Kasta Goob kasta
Hogaanka u qabo suuqyada maaliyadeed adoo adeegsanaya FXPRIMUS kuna ganansanaya 50,000 doolar oo lacag tijaabo ah.
Barnaamijka MetaTrader waxaa laga helaa barnaamijyo kala duwan iyo mobilada ay kamid yihiin iphone, ipad, android iyo window-ka combiyuutarka ama taleefanada.
Iyada oo in kabadan 120 aalado maaliyadeed ah aanu bixino, dhammaan macaamiishayda ayaa adeegsan kara ka ganacsiga Forex, CFDs stock indices, Badeecadaha, Saamiyada, Biraha, iyo Tamarta, dhamaantood waxaad ka helaysaa akoonkaaga tijaabada ah (Demo Account).